‘मोटरबाटोले ट्रेकिङ रुट बिगार्‍यो’
दीपेशबाबु सुवेदी (३५), ट्रेकिङ गाइड
मेरो घर कास्कीमा पर्छ। २०५९ सालबाट ट्रेकिङको काम सुरु गरेको हुँ। सुरुवातमा पोर्टर थिएँ। तीन वर्षजति पोर्टर रहेँ। ट्रेकिङ गाइडको लाइसेन्स २०६० सालमा निकालेको हुँ। त्यसपछि पोर्टर र ट्रेकिङ गाइडका रूपमा काम गर्न थालेँ। एसएलसी दिएपछि के गर्ने त ? भनेर यो काम सुरु गरेँ। मेरो बुबा पनि यही क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले पनि यता आएको हुँ।
मेरो आफ्नै कम्पनी छ, हिमालय सिकर्स ट्रेक्स। दुई वर्षअघि दर्ता गरेको हुँ। त्यसमार्फत अहिले अनलाइनबाट सम्पर्क गर्छु। भ्याएसम्म आफैँ ट्रेकिङ गाइड भएर पर्यटकसँग जान्छु। यो पेशाबाट खान–लाउन पुगेको छ। नेपालमा पर्यटन व्यवसाय राम्रो भयो भने गाइड पेशा राम्रै छ। यो पेशा सिजनेबल हुन्छ।
सगरमाथा, लाङ्टाङ, मनासलु, डोल्पा, अन्नपूर्ण सर्किटसँगै नेपालका नाम चलेका अधिकांश ट्रेकिङ रुटमा पुगेको छु। ट्रेकिङ व्यवसाय पहिला राम्रो थियो। बीचमा मन्दी आयो। अहिले ट्रेकिङ जाने पर्यटक त आएका छन् तर कम्पनीबाट गाइड तथा पोर्टर लिएर जाने पर्यटक कम छन्। व्यक्तिगत रूपमा जाने धेरै छन्। सडक मार्गको विस्तारका कारण यस्तो भएको होजस्तो लाग्छ। पहिला अन्नपूर्ण सर्किटलगायत धेरै ठाउँमा मोटरबाटो थिएन। पैदल जानुपथ्र्यो। पैदल जाने बेलामा बाटो अप्ठ्यारो थियो, झुकिन्थ्यो। हराइन्छ कि भन्ने डर हुन्थ्यो। अनि, गाइड लगिन्थ्यो। अहिले सबैतिर डोजरले बाटो खन्यो। मोटरबाटोमा जान गाइड किन चाहियो ? भन्ने भएर पर्यटकले गाइड लैजान छोडे। गाइडसँग जाँदा उसले भनेको होटलमा बस्नुपर्ने, उसको निर्देशन मान्नुपर्ने भनेर पनि कसै–कसैले लैजाँदैनन्।
पहिला अन्नपूर्ण सर्किट पुग्न कम्तीमा १५–१६ दिन लाग्थ्यो। अहिले मनाङसम्म जिप जान्छ। पाँच दिन, सात दिनमा नै यो रुट पूरा हुन्छ। घोरेपानीका लागि पनि उताबाट घान्दुकसम्म र यताबाट उल्लेरीसम्म बाटो गएको छ। मनासलुतिर गइयो भने सोती खोलासम्म बस नै जान्छ। सबै ठाउँमा मोटरबाटोले गर्दा ट्रेकिङ छोटो हुँदै आएको छ। पहिला १७– १८ दिन लाग्ने ट्रेकिङ अहिले छ–सात दिनमा झरेको छ। एभरेस्ट बेस क्याम्पतिर भने अहिलेसम्म जेनतेन बाँकी छ। विशेष गरी, अन्नपूर्ण सर्किटमा मोटरबाटोले असर गरेको छ। मोटरबाटोले ट्रेकिङ रुट बिगारेको छ।
यात्रामा जाँदा युरोपियन र अमेरिकन पर्यटकसँग सजिलो हुन्छ। उनीहरूलाई कुरा बुझाउन सजिलो हुन्छ। चाइनिज, कोरियन, थाई, जापनिजलाई कुरा बुझाउन असाध्यै गाह्रो हुन्छ। उनीहरू आफ्नै पाराका हुन्छन्। अमेरिकन र युरोपियनले भनेको मान्छन्। एसियनले अलि टेर्दैनन्। भारतीयहरू पहिला टुरका लागि मात्र आउँथे। अहिले ट्रेकिङमा जान थालेका छन्।
प्रस्तुतिः राजाराम पौडेल।